Malunga nathi - Qingdao Yiruihe Co., Ltd.
Imbali kunye nobuchule beYirui United buxeliwe kuzo zonke izihlangu zezihlangu esizenzileyo.
Ukusukela ngo-1998, inkampani iyile, yavelisa, kwaye yasasaza iintlobo ngeentlobo ze-SHEEPSKIN SHOES, yonke into ukusuka kwi-BOOTS ukuya kwi-SLIPPERS ukuya kwi-MOCCASINS ukuya kwi-FOOTWEAR. Ewe, iYirui United iqhayisa ngaphezulu kweminyaka engama-21 yobungcweti obugqwesileyo, iligcina inyathelo ngalinye lobugcisa bokwenza izihlangu.
Kuzo zonke iinguqu zenkcubeko kunye notshintsho kwifashoni, isizukulwana ngasinye sihlolisise izinto ezintsha kunye neendlela zokuvelisa ukuyila izihlangu ezintle ezihambelana namaxesha kunye neemfuno zabathengi.
Imveliso yethu yahlolwa ziinkampani ezininzi zehlabathi ezidumileyo. Njenge-SGS; TUV.etc.
Zonke izinto zam zidlulile kuvavanyo lwe-REACH
Umzi-mveliso wam uneBSCI mveliso ehlola isatifikethi ukusukela ngo-2013
Siqinisekisa ukuba siza kubuyekeza yonke ilahleko ukuba imveliso yethu ayinakho ukuhlangabezana neemfuno zomyalelo.
Sebenzisa imodeli yolawulo lokusika kumhlaba wonke ukuyila umfanekiso okhethekileyo we-Intanethi kuninzi lwezihlangu kunye namashishini, kunye nokukhuthaza ukukhula kwabo okukhawulezayo, okunempilo kunye nokuzinzileyo! Inkampani imisela umbono "wokuqala", inyanzelisa ukuthembela kumgangatho wokwakha uphawu, kwaye ikhokele intengiso kunye nophawu. Ngokuhambelana ne-ISO9001: 2000 yolawulo lomgangatho wenkqubo esemgangathweni, inkampani iseke imigangatho engqongqo kuphuhliso lwemveliso kunye noyilo, ukuhanjiswa kwezinto ezingafunekiyo kunye nezinto ezincedisayo, ukuhlolwa kwemveliso kwinkonzo yasemva kokuthengisa. Inkqubo yokuqinisekisa umgangatho olungeleleneyo. Umgangatho onokuthenjwa kunye neenkonzo ezigqwesileyo emva kokuthengisa ziye zaphucula ngokufanelekileyo ukuthandwa kwegama laseYiruihe kunye nokwoneliseka kwabathengi. Izizukulwana ezibini zaseYiruihe zihambelana nefilosofi yecandelo "lomsunguli, ububele, ubulungisa, kunye nokuthembeka", ngokungakhathali nangokunyamezelayo ukukhuthaza lonke ulawulo lwetyala lwenkampani, ukubambelela kwifilosofi yolawulo "ejolise ebantwini", kwaye bazabalazela ukudala indawo yophuhliso yabasebenzi yokubonisa iitalente zabo kunye nebala lokudlala elinobulungisa nelikhululekileyo. Idlala indima ebalulekileyo ekuzabalazeleni iyunithi ephucukileyo, ukuqhubela phambili nolwakhiwo lwenkcubeko yecandelo, ukomeleza umanyano kunye nobuchule kubasebenzi, kunye nokuqinisekisa ukukhula okuzinzileyo nokunempilo kwenkampani.